Explainer ဗီဒီယိုများ (ဥပမာနှင့်အတူ) ၏ Ultimate လမ်းညွှန် | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 3, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သင်သည်သူတို့၏ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ကာတွန်းဗွီဒီယိုများကို အသုံးပြု၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့ဖူးပေမည်။ သင်သည်သူတို့အားရှင်းပြသူများ၏ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကိုသင်အမည်ပေးသည်ဆိုပါစို့။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုသာထမ်းဆောင်သည် - ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာဖြင့်ရှင်းပြရန်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုအလွန်ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှင်းပြသူများ၏ဗွီဒီယိုပုံစံများသည်အဘယ်ကြောင့်ကွဲပြားသနည်း။ စတိုင်တစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားသောပရိသတ်အတွက်ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးမည်သည့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏ဘတ်ဂျက်ကိုမဆိုထိခိုက်လိမ့်မည်။ ပရိသတ်ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ဖို့နဲ့အမှန်တကယ်ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်သင်တစ်ယောက်ချင်းစီကိုသိသင့်ပါတယ် စတိုင် Explainer ဗီဒီယို၏။ မေးခွန်းမှာ -
၎င်းသည်ပရိုဂရမ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပြသသည့်ရိုးရှင်းသောမျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်သည်။ Screencast ဗီဒီယိုများသည်ဘတ်ဂျက်အနိမ့်ဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်းအသုံးတည့်သည်။ ဒီဗီဒီယိုတွေဟာအမှတ်တံဆိပ်ထက်ပညာရေးအကြောင်းပိုပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဗီဒီယိုပိုရှည် (၅ မိနစ်ကျော်) ဖြစ်ပြီး၊ ထုတ်ကုန်များမပြုလုပ်မီမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ရှုလိုသူများအတွက်အလားအလာကောင်းများအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အကျော်ကြားဆုံးကာတွန်းရှင်းပြဗီဒီယိုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုကာတွန်းဇာတ်ကောင်က ဦး ဆောင်ပြီးသူမဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ပြproblemနာကြီးတစ်ခုပါရှိပါတယ်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေါ်လာသည့်အခါ…တစ်နေ့တာကိုချွေတာခြင်း!
ဇာတ်ကောင်သည်များသောအားဖြင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ် persona (target ပရိသတ်) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စရိုက်ကိုပေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူသားဆန်အောင်ပြုလုပ်ထားသောစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပုံစံရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ဒီဗီဒီယိုမျိုးတွေကရလဒ်ကောင်းတွေရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကြည့်ရှုသူတွေရဲ့အာရုံကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖမ်းမိပြီးကြည့်ရတာတကယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်။
ဒီခေတ်ဆန်ပြီးအေးမြတဲ့နည်းပညာကိုမူလကသရုပ်ပြဆရာတစ်ယောက်ကကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်နေစဉ်အဖြူရောင်ဘောင်ပေါ်တွင်ဆွဲချခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤနည်းစနစ်သည်ပြောင်းလဲလာပြီးဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ဖန်တီးလာသည်။ UPS သည် Whiteboard Commercials ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ တွင် Royal Society of Arts ကရွေးချယ်ထားသောမိန့်ခွန်းများမှ Whiteboard ကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး RSA ၏ Youtube ရုပ်သံလိုင်းကိုကမ္ဘာအနှံ့အမြတ်အစွန်းမယူသောရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည်။
Whiteboard Animations သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနည်းပညာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုရှိပြီး၎င်းသည်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုသူ၏မျက်မှောက်တွင်ဖန်တီးထားသည်။
ဤရှင်းပြသောဗွီဒီယိုများသည်အထူးသဖြင့် B2B ဆက်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
3D Element များဖြင့်ရွေ့လျားဂရပ်ဖစ်
Motion element ဖြင့် 3D element များပေါင်းစည်းမှုဖြင့်ပိုမိုကြော့ရှင်းပြီးခေတ်မီဆန်းပြားသောအသွင်အပြင်ကိုရရှိစေသည်။ သူတို့သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားပြိုင်ဆိုင်မှုထက်ကျော်လွန်အောင်ပြုလုပ်ရာ၌အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Motion Graphics သည်နည်းပညာအသစ်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Motion Graphics နှင့်အတူကာတွန်းစတိုင်
Motion Graphics ပါ ၀ င်သည့် Cartoon Style Explainer ဗီဒီယိုများသည်ကာတွန်းဗွီဒီယိုများတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များသည်ဇာတ်လမ်းကို ဦး ဆောင်။ ပရိသတ်နှင့်အနီးကပ်ချဉ်းကပ်မှုပေးသည်။ ရှုပ်ထွေးသောအယူအဆများကိုရှင်းပြရန်လှုပ်ရှားမှုဂရပ်ဖစ်ကာတွန်းကိုအသုံးပြုသည်။
ဤစတိုင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် - ဖော်ရွေသည့်အရာနှင့်ကာတွန်းစတိုင်ဗီဒီယို၏ရယ်စရာဥပစာစကားနှင့်ရွေ့လျားဂရပ်ဖစ်နည်းပညာ၏ကာတွန်းဆွဲဆောင်မှု၏စွမ်းအား။
B2C ဆက်သွယ်ရေးအတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စတင်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Stop-motion သို့မဟုတ် Claymation ကာတွန်းဗီဒီယိုများ
Stop-motion Explerer ဗီဒီယိုများသည်အဆင့်မြင့်ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုမှီခိုခြင်းမရှိသောကြောင့်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား handcrafted ဗီဒီယိုများ - ဘောင်အားဖြင့်ပြီးမြောက်အောင်မြင်။
ဒီကာတွန်းကို frame တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (သို့) ရုပ်ငြိမ်ရိုက်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ထုတ်လုပ်ရန်အချိန်ပိုယူရသည်။ ရလဒ်များမှာလုံးဝကွဲပြားခြားနားပြီးအံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ Stop motion သည်လှပသောနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက၎င်းတို့သည်အတော်လေးစျေးကြီးနိုင်သည်။
A ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 3D ကာတွန်းဗီဒီယို 3D ဗီဒီယိုတစ်ခုပြီးမြောက်နိုင်သည့်အကန့်အသတ်မရှိသောကြောင့်တကယ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ သို့သျောလညျး, ဒီ option ကိုစျေးအကြီးဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူစတင်များအတွက် option ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
အကယ်လို့သင်က 3D ကာတွန်းဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ဖို့တကယ်ကိုစဉ်းစားနေပြီးသင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အိမ်စာကိုအရင်လုပ်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုရှာဖွေသင့်တယ်။ ဘတ်ဂျက်နည်းပါးသည့် 3D ကာတွန်းဗီဒီယိုသည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ယခုတွင်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာအတွက်မည်သည့်သက်ဝင်ကာတွန်းရှင်းပြသည့်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားနှင့်သင့်ပရိသတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုကိုအပြည့်အ ၀ ဆွဲဆောင်နိုင်မည်နည်းကိုအလွန်ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ ပိုမိုလိုပါသလား Yum Yum Video ၏အခမဲ့ ebook ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗွီဒီယိုများအတွက်လမ်းညွှန်။
ထုတ်ဖော်: Yum Yum ကဒီ post ကိုအတူတကွထားရှိခဲ့တယ် Martech Zone စာဖတ်သူများနှင့်ငါတို့သည်အနည်းငယ်စီမံကိန်းများအပေါ်တိုက်ရိုက်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်!
Tags: 3d ကာတွန်းဗီဒီယိုများ3d Animation ရဲ့3d ဗီဒီယိုကာတွန်းဗီဒီယိုကကာတွန်းဗီဒီယိုဇာတ်ကောင်ကာတွန်းဗီဒီယိုရွှံ့ကာတွန်းသစ်ပင်ရှင်းပြဗီဒီယိုရှင်းပြဗီဒီယိုများရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ရွေ့လျားဂရပ်ဖစ်ဗီဒီယိုဗီဒီယိုမလှုပ်နဲ့Whiteboard ကာတွန်းဗီဒီယိုwhiteboard ရှင်းပြစက်ဗီဒီယို
21:2014 pm တွင်စက်တင်ဘာ 6, 04 မှာ
ငါကဤအရာအမျိုးအစားကို seraching ၏အလေ့အကျင့်၌ရှိ၏, ဒါကြောင့်၎င်း၏ကောင်းတဲ့နှင့်အလွန်ကောင်းတဲ့ဥပမာနှင့်အတူဖော်ပြခဲ့သည်။
မေလ 14, 2015 မှာ 6: 16 pm တွင်
ကျွန်ုပ်ဖောက်သည်များသည်မည်သည့်ရှင်းပြသည့်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်မေးမြန်းသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ပြသရန်ဤလက်စွဲစာအုပ်ရှိသည်။ ဤလမ်းညွှန်ကိုအတူတကွထားသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးကိုသင်၏ဘလော့ဂ်တွင်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းရှိပါသလား။ ငါအီးမေးလ်ကို comment အပိုင်းမှာထားလိုက်တယ်